Ukugcwalisa ngokupheleleyo iMacBook yakho kunye nebhetri ye-mophie ye-USB-C | Ndisuka mac
Ukugcwalisa ngokupheleleyo iMacBook yakho kunye nebhetri yesikhululo samandla se-USB-C
UPedro Rodas | | these, Iikhompyuter zeMac
Ukuba ungumntu onesibindi ongayishiyiyo iMacBook yakho nangaliphi na ixesha, ngokuqinisekileyo imveliso esiza kukubonisa yona namhlanje iya kutsala umdla wakho. Yibhetri yangaphandle umgangatho ophezulu oko kuyakuvumela ukuba ube nokuzimela okuphindwe kabini ukuya kwi-MacBook echaphazelekayo kwaye inokuthi iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde yenzeke these Pro nge-USB-C.
Sithetha nge mophie isixhobo sombane XXL USB-C, Ibhetri yangaphandle yomgangatho ogqithisileyo onesitoreji sentlawulo ekrelekrele kunye nenkqubo yokutshaja eyenza ukuba ibaluleke kakhulu.
Kubo bonke abantu abafuna amandla ongezelelweyo okuhlaziya izixhobo zabo, sibonisa ibhetri ye-mophie yamandla e-USB-C. Yibhetri UNIVERSAL amandla aphezulu anamandla ngokwaneleyo okuhlawulisa i- IMacBook Pro ene-USB-C kunye ne-iPhone okanye i-iPad ngaxeshanye. Umthamo wayo yi-19.500 mAh ebonelela ngamandla ukuya kuthi ga kwi-30 W, ngaloo ndlela ikwazi ukutshaja ngokukhawuleza izixhobo ezimbini ngaxeshanye.
Ngokubhekisele kwizixhobo, inelinen enganyangekiyo yelaphu egubungeleyo, iyathandeka ekuphathweni. Ngenxa yobungakanani bayo, ilungele ukuhamba: Ukuphakama: 2,32cm, Ubude: 15cm, Ububanzi: 8,38cm, Ubunzima: 390g
Le bhetri inetekhnoloji Intlawulo yeVault, ngaloo ndlela ugcina umrhumo wakho ixesha elide. Inkqubo yolawulo lwamandla edijithali isebenzisa isekethe efanelekileyo ukunxibelelana nezixhobo kwaye ibahlawulise ngesona santya siphezulu ngaphandle kokuncama ukhuseleko. Ikwanayo ne-Priority + inkqubo yokutshaja ehlawulisa isixhobo kuqala kwaye emva koko sisixhobo samandla (kuphela kwizixhobo eziqhagamshelwe kwizibuko le-USB-A). Kufuneka kuqatshelwe ukuba izibuko le-USB-A yi-2,4 A.
Isikhululo samandla seMophie se-USB-C XXL
Intambo ye-USB-A ukuya kwi-USB-C
Intambo ye-USB-C ukuya kwi-USB-C
Isikhokelo sokuQala esiKhawulezayo
Ixabiso layo ngu 139,95 euro kwaye ungayifumana kwifayile ye- Iwebhusayithi ka-Apple, ke yimveliso eqinisekisiweyo kwaye iyacetyiswa ngu-Apple uqobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Ukugcwalisa ngokupheleleyo iMacBook yakho kunye nebhetri yesikhululo samandla se-USB-C
UToni Mac sitsho
Ngaba unayo ikhonkco yentengiso? Enkosi
Phendula Toni Mac
UPedro Carlos Rodas Martin sitsho
Kwiwebhusayithi yeApple kwizixhobo
Phendula kuPedro Carlos Rodas Martín
Yima iApple ubukele ukumila kwe logo yeApple
Phatha iMacbook okanye iMacbook Pro yakho ngale ngxowa mfutshane